Su'aasha toddobaadka -
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 22, 2020 12: 25 No Comments
Ha u ogolaanin dadku inay kuu daweeyaan sida sigaarka oo keliya, waxay ku isticmaalaan oo keliya marka ay caajismaan ka dibna; ku tuuraan markay kaa dhamaadaan - u ekaada sida daroogada ...	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Febraayo 1, 2020 12: 40 No Comments
1. Haweenka curvy ah had iyo jeer waxaa loo arkaa inay yihiin kuwo qurux badan, ilaa waqti aan caadi ahayn. 2. Farshaxanimada waa mid ?? Laakiin xitaa sayniska ayaa sheegaya inay yihiin jinsi. 3. Waxay xitaa ka sii qurux badan yihiin ...	Akhri wax dheeraad ah
Aqoonta Zoolojiga: Maxaad ugu yeeraysaa Zebra afkaaga hooyo?
Boqorada Elizabeth II iyo Boqor George oo saldhig u ahaa Suldaankii Sulaymaan - Gurigii Daa'uud "Boqortimadiisa" Boqortooyada Haile Selassie I
Muslimiinta Madow: Waa waqtigii kuugu laaban lahaa Ilaahaaga, tan iyo waagii hore, madow Afrikaan ah ayaa ogaa Ilaah, tukaday oo lahaa jinsiyad sare, aqoon iyo niyadeed
Feb24 10: 02